यसरी ठगिन्छ सुन्दरी प्रतियोगितामा
– वार्षिक आधा दर्जनजति सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्दै आइरहेको सिजन मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपराज वन्त दुई हप्ताअघि दरबारमार्गस्थित प्रहरी प्रभागमा एक रात थुनिए । मिस ई–कलेजको उपाधि दिलाउने भन्दै दुई लाख रुपैयाँ जिप्ट्याएर पनि उपाधि...
लौ के भयो नम्रता श्रेष्ठलाई ?
नायिका नम्रता श्रेष्ठ फेरि अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएकी छिन् । गत वर्षको चैत्रमा देब्रे मृगौलामा पत्थरी देखिएर आकस्मिक शल्यक्रिया गराएकी नम्रतालाई अहिले दोस्रो पटक टाइफाइड भएको छ । शल्यक्रिया पछि चिकित्सकले आराम गर्नु...
सेक्स भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्ने हिरोइन पक्राउ (भिडियो हेर्नुस्)
सेक्स टेप बनाएर ब्ल्याकमेल गरेको अभियोगमा एक हिरोइन पक्राउ परेकी छिन् । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री नयना कृष्णालाई सेक्स टेप बनाएर ब्ल्याकमेल गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । नयना भारतीय कन्नड़ चलचित्रकी अभिनेत्री हुन्...
किन आए आमिर खान नेपालमा ?
काठमाडौं, २१ असोज । बलिउडका चर्चित अभिनेता आमिर खान काठमाडौं आइपुगेका छन् । दुई दिने भ्रमणका लागि उनी मंगलबार नेपाल आएका हुन् । जेट एयरवेजको विमानबाट दिउँसो ६ जना सुरक्षा गार्डसहित त्रिभुवन बिमानस्थल ओर्लिएका...
अन्जु पन्तले अडान तोडिन, हङकङमा हिन्दु गीत गाइन् (हेर्नुस भिडियो)
हङकङ, २० असोज । दशैं गीत नगाउँदा विवादमा तानिएकी गायिका अञ्जु पन्तले हङकङमा भने दशैंको शुभकामना सन्देशमात्र दिइनन्, दशैं गीत गाएरै शुभकामना पनि दिएकी छन्। सहारा एकेडमी पोखराको सहयोगार्थ हङकङमा आयोजित सहारा साँझमा उनले...
सुन्दरी प्रतियोगिता बनाम होडबाजी
एक्काइसौं शताब्दीको संघारसम्म आइपुग्दा थुप्रै सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । अब महिनैपिच्छे, हप्तैपिच्छे सुन्दरी प्रतियोगिताहरूको होडबाजी छाएको छ । तर जति पटक पनि सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूको विषय उठाइन्छ, समाजमा नाक खुम्च्याउने भलाद्मीहरू प्रकट भइहाल्छन्...
विजयकुमारसँग किन रिसाए दीपकराज गिरी ?
काठमाडौं, १९ असोज । हास्यकलाकार दीपकराज गिरीले पत्रकार बिजयकुमारको पुस्तक ‘खुसी’मा हास्य कलाकारमाथि गरिएको टिप्पणीप्रति आक्रोश पोखेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्ना धारणा राख्दै गिरीले हास्य कलाकारहरुलाई खित्खिते भनिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।...
नम्रता र रिमाको लभ ब्रेक, को थिए ब्याइफ्रेण्ड ?
नायिकाद्वय रीमा विश्वकर्मा र नम्रता सापकोटा फिल्मी क्षेत्रमा त अपेक्षा अनुरुप अगाडि बढ्न सकेनन् नै, उनीहरुको प्रेम पनि असफल भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । रिमा मोडल तथा व्यापारी अमिर सेखसँग लामो समयदेखि प्रेममा...
छाडा हिरोइनहरुको भागाभाग…
केही समयअघि यौनजन्य फिल्मको भेलै आएको थियो । विशेषगरी लुट र चपली हाइटपछि छाडा शब्द र दृश्य राखेर फिल्म बनाउनेहरू सलबलाएका थिए । लुट र चपली हाइटले पैसा कमाएको देखेपछि न्यूनतम मर्यादाको समेत ख्याल...
टिभी कार्यक्रममा जानीजानी स्तन देखाएकी गायिका भन्छिन्, ‘सेक्सी हुँ, भल्गर होइन्’
‘वक्षस्थल देखिएको’ भन्दै नेपाल टेलिभिजन प्लसले रेकर्डेड अन्तर्वार्ता सेन्सर गरेपछि लोकदोहोरी गायिका ज्योति मगर विवादमा तानिइन् । हिमालयन टेलिभिजनका लागि रेकर्डेड उनी गेस्ट रहेको ‘जोगेन्द्रके पान दुकान’ कार्यक्रम पनि पोसाककै कारण रोकियो । केही...
कलाले भन्दा छालाले टिकेका हिरोइनहरु (फोटो फिचरसहित)
कलाकार हुनका लागि सिर्जनात्मक खुबी नै चाहिन्छ । तर, चलचित्र उद्योगमा केही यस्ता कलाकार छन्, जो कलाले भन्दा पनि छालाले टिकेका छन् । भारतीय संचारमाध्यमले केही यस्ता कलाकारको नाम सार्वजनिक गरेको छ, जो कला...
आखिर के हुँदैछ यो फिल्मी क्षेत्रमा ?
आजकल फिल्म चलाउन अनेक अनेक तिकडम मच्चाउन थालिएको छ । खासगरि नांगोपन फिल्मी क्षेत्रमा खुबै बढेर गएको छ । बलिउडमा होस या कलिउडमा, नग्नताले नै पश्रय पाइरहेको छ । यस्तै बेला बलिउडमा भने पोष्टरमा...
« 1 … 425 426 427 428 429 … 448 »